Super Diamond Deluxe Mampahatsiahy anao ny tanteraka lafo vidy! Izany no mahatonga tsapanao ahoana no ho eo afovoan'ny vatosoa mamirapiratra ny fanatitra hohanina maro payouts. Ary ny hatsaran-tarehy ny slot mifototra amin 'ny zava-misy fa tsy misy tampon-tanety na aelezo marika. Noho izany, tokony ho tanjona ho an 'ireo ny tsikombakomba ny 3 na 4, hitondra anao ho any amin'ny fandresena. Ianao mitaky rehetra dia kely ny vintana ho ny mpanjakan 'ny Super Diamond Deluxe slot reels.
IGT na ny iraisam-pirenena Teknolojia Gaming dia Casino lalao rindrambaiko orinasa manome hatramin'ny 2006 amin'ny anaran'i Gtech orinasa, rehefa nahazo Gtech Lottomatica in 2006. Ever nanomboka teo, ny orinasa dia manao lalao mahafinaritra slot mesmerizing ny Casino tia rehetra izao, ary avy eo. Vao haingana, in 2015, ny orinasa nahazo ny anarany rehefa nahazo ny orinasa Amerikana IGT ka naka ny ny anarany.
Super Diamond Deluxe dia tsotra slot lalao. Ny foto-kevitra dia mifandray amin'ny vatosoa toy ny marika dia ny voahangy, jades sy tsara tarehy cutwork diamondra. Dia mijery ny reels kanto amin'ny lalina fototra amin'ny vato mena mamiratra noho izany. Ny slot no notendren'ny 5 reels ary 10 paylines ary tsy ilaina fa ny fandresena dia afaka manomboka tsipika avy amin'ny voalohany ihany no miraingiraingy azon'ny. Ankoatra ny loko vatosoa, 10, J, Q, K, sy A no kely karama ny marika. Tsy misy tampon-tanety na manahaka ao amin'io slot izay tsy ampy amin'ny teny payouts ho anao. Ny tena tombony dia ny miandalana jackpot endri-javatra ny lalao. koa, toy ny sariohatra stacked hatao amin'ny reels, azo atao ny manao Fandresena lehibe ao amin'ity slot. Ao amin'ny Progressive jackpot endri-javatra, tsy misy raikitra nandresy tsikombakomba ilaina. Ianao fotsiny mila hiverina ny reels ny volamena izay mitranga tsapaka dieny mbola spins. Ny fiverenana amin'ny mpilalao isan-jato no tena tsara toy ny slot manolotra ny payout ny momba ny 96.43% ny fotoana . Ny hilokana isan-karazany manomboka avy £ 0,20, ary miakatra ny £ 500. Raha mijery ny volatility, the game offers somewhere between low to medium volatility, na izany aza, noho ny tsikelikely jackpots, olona mampidi-doza koa ny fahazotoan-komana hamono ny hetahetany.
Ny fototra sy feonkira ho mendrika sy mifanaraka tsara amin'ny foto-kevitry ny Super Diamond Deluxe. IGT manana slots hafa koa isan-karazany mifandray amin'ny loha-hevitra ity, fa ity mijoro slot hafa mijery ny tsotra sy ny enjoyability ny gameplay. Noho izany, ny olona izay sitrakao fotsiny mantsy ny hanana fotoana mahafinaritra dia tokony handeha ho izany tokoa slot.